धरानमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेन, संक्रमित १९६ पुगे, इटहरीमा पनि संक्रमण सुरु – Health Post Nepal
धरानमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेन, संक्रमित १९६ पुगे, इटहरीमा पनि संक्रमण सुरु
२०७६ जेठ २४ गते १४:४५
सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिकामा तीन सातादेखि फैलिएको डेंगुरोग अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । ३१ वैशाखमा ३ बालबालिकाबाट सुरु भएको डेंगुको संक्रमण फैलिँदै जाँदा १ सय ९६ जनामा डेंगु फेलापरिसकेको छ । यद्यपि, हालसम्म यसक्रममा डेंगुले ज्यान लिएको भने खबर छैन ।
धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी रामबाबु यादवले हेस्थपोस्टसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान तीव्र रूपमा चलाए पनि डेंगुको प्रकोप नियन्त्रणमा आउनुको सट्ट झन् फैलिँदै गएको छ ।’ यादवका अनुसार हाल बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा १५ जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
‘अझै पनि समुदायमा जनचेतनाको कमी छ,’ यादवले भने, ‘हामीले लार्भा यो हो, यसरी नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिए पनि समुदायका मानिसले लामखुट्टेको लार्भालाई किरा भनेर हेलचक्याइँ गरेको अवस्था छ, जसले गर्दा दिनप्रतिदिन डेंगुका बिरामी बढ्दै छन् ।’
इटहरीमा पनि ३ जनामा डेंगु देखिएको स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाका प्रवक्ता घनश्याम पोखरेलले जानकरी दिए । पोखरेलका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान जारी छ । यसका साथै जनचेतनाको काम पनि भइरहेको उनले बताए ।
३१ वैशाखमा ३ बालबालिकाबाट सुरु भएको डेंगुको संक्रमण फैलिँदै जाँदा १ सय ९६ जनामा डेंगु फेलापरिसकेको छ । इटहरीमा पनि ३ जनामा डेंगु देखिएको स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाका प्रवक्ता घनश्याम पोखरेलले जानकरी दिए ।
धरान उपमहानगरपालिकाका ८, १० र १५ नम्बर वडा सबैभन्दा बढी डेंगुबाट प्रभावित बनेका छन् । डेंगु प्रभावित क्षेत्रमा बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र धरान उपमहानगरपालिकाको समन्यवमा ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
यादवका अनुसार ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ टोलीको गठन गरी डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको सहभागितामा लार्भा नष्ट गर्ने काम भइरहेको छ । तर, अझै पनि जनसमुदायमा चेतनाको विस्तार हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।
धरानमा डेंगुको संक्रमण फैलिन थालेपछि सोको नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाट १९ जेठमा स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाका डा. समीर अधिकारी, प्राविधिक प्रकाश घिमिरेलगायतको विशेषज्ञ टोली धरान पुगेको थियो । टोलीले स्थानीय सरकार, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलगायतसित छलफल गरी रोगनियन्त्रणका लागि रणनीति तर्जुमा गरी अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सरकारको भरमज्दुर प्रयासका बाबजुद पनि तीन साता बितिसक्दा पनि डेंगु नियन्त्रणमा आउन नसकी उल्टै नयाँ ठाउँहरूमा संक्रमण फैलिँदै जानुले चुनौती खडा गरेको छ ।
संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइका कारण सर्ने डेंगुरोग मानिसबाट मानिसमा भने नसर्ने विशेषज्ञको भनाइ छ । गर्मी बढेसँगै विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा डेंगुले जनसाधारणलाई ग्रस्त बनाउने गरेको छ । डेंगुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुको विकल्प नभएको विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बताउँछन् । सर्वसाधारणमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपायबारे चेतना विस्तार नभएसम्म डेंगु नियन्त्रण चुनौतीकै रूपमा रहने उनीहरूको भनाइ छ ।